प्रदीपलाई पूजाको शुभकामना, के लेखिन् त स्टाटस ? « Ramailo छ
प्रदीपलाई पूजाको शुभकामना, के लेखिन् त स्टाटस ?
प्रदीप खड्का स्टारर फिल्म लिलिबिली लाई नायिका पूजा शर्माले सफलताको शुभकामना दिएकी छन् । आजदेखि प्रदर्शनमा आएको प्रदीपको फिल्मलाई फेसबुकमा फोटो राखी स्टाटस लेखेर पूजाले वेस्ट विसेश दिएकी हुन् ।
‘प्रेम गीत’का प्रेम अर्थात् प्रदीप र ‘रामकहानी’का राम अर्थात नायक आकाश श्रेष्ठको बिचमा आफु बसेको फोटो राख्दै पूजाले ‘लिलिबिली’ सफलताको स्टाटस लेखेकी छन् । ‘जसरी प्रेम र गीतको मिलन विछोड कहानी रुचाई त्यही कहानीलाई दर्शकले धेरै माया गरिदिनु भो’, पूजा थप्छिन्, ‘त्यसरी नै लिलिबिली ले पनि सबैको माया पाउँछ । सफलताको अग्रिम शुभकामना प्रदीप तिमीलाई !’ ‘लिलिबिली’ निर्देशक मिलन चाम्सलाई पनि पूजाले डियर भन्दै सफलताको शुभकामना दिएकी छन् ।
फिल्म हिट भएतापनि प्रेम गीत जोडी पूजा र प्रदीप बिच आपसी असझदारीका कारण लामो समयसम्म बोलचाल भएको थिएन । केही साता अगाडी मात्रै उनीहरु एक आकस्मीक भेटघाटमा बोलेका थिए । पुर्नमिलन सँगै फ्यानले भने प्रदीप र पूजाको जोडी फेरी पर्दामा हेर्न चाहेका छन् । के यो सम्भव होला ? लिलिबिली लाई दर्शकले दिएको प्रतिक्रिया हेर्नुस् :